ना’यिका प्रीयंका कार्की आमा बनिन्!:: Mero Desh
ना’यिका प्रीयंका कार्की आमा बनिन्!
Published on: ६ आश्विन २०७८, बुधबार ०७:४९
नायिका पृयंका कार्कीले छोरिलाइ जन्म दिएकी छिन्। उनले सामाजिक सन्जालमा ग’र्भवती भएको तस्बिरहरु पोस्ट गर्दै आइरहेकी थिइन। उनको ती तस्बिरहरुले गर्दा विभिन्न आ’रोप र आ’लोच’ना खेप्दै आइरहेकी थिइन। दर्शक ले जति आ’लो’चना गरे पनि उनलाइ केही अ’सर नपर्ने बताएकी थिईन।
नायिका प्रियंका कार्की आमा बनेकी छिन् । प्रियंकाले छोरीलाई जन्म दिएकी हुन् । सामाजिक संजालमा तस्वीर पोष्ट गर्दै प्रियंकाले आफू आमा बनेको उल्लेख गरेकी छिन् प्रियंकाले यो सुन्दर संसारमा छोरी आयंका कार्कीलाई स्वागत छ भनेर लेखेकी छिन् । तस्वीरमा प्रियंका र आयुष्मान
देशराज जोशी खुशी देखिएका छन् । नायिका प्रियंका र नायक आयुष्मान देशराज जोशीले वि.सं २०७६ साल फागुण १६ गते बिबाह गरेका थिए । ग’र्भवती भएपछि प्रियंकाले सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेका तस्वीरहरुले उनको चर्चा, आलोचना सबै भएको थियो ।
यो पनि, ,असोज, काठमाडौं । सुनको मूल्य तोलामा ९ सय रुपैयाँले बढेको छ । मंगलबार ८८ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुनको भाउ बुधबार ९० हजार एक सय रुपैयाँ कायम भ एको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ आजका लागि तेजाबी सुनको भाउ ८९ हजार ६५० रुपैयाँ तोकिएको छ ।
चाँदीको मूल्य पनि २५ रुपैयाँले बढेको छ । मंगलबार तोलामा ११ सय ४० रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदीको आजको कारोबार मूल्य ११ सय ६५ रुपैयाँ पुगेको महासंघ ले जनाएको छ । असोज लागेपछि पहिलो पटक सुनको बजार मूल्य ९० हजार पुगेको महासंघले जनाएको छ ।